လူအများနှင့် မသက်ဆိုင်သော …. လူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူအများနှင့် မသက်ဆိုင်သော …. လူ
လူအများနှင့် မသက်ဆိုင်သော …. လူ
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Mar 9, 2013 in Creative Writing | 51 comments
ဆရာမင်းလူ၏ ၀တ္ထုအား ဆင့်ပွားမှီငြမ်းခြင်း
ဖြောက် …. ဖောက် ….. ဖြောက် … ဖြောက်
အင့်….ကနဲ တချက်လူးလွန့်ရင်း ကိုရင်အောင်ဆိုးတယောက် ပုဆိုးခြုံအတွင်းမှ ကွေးထားသော ဒူးနှစ်လုံးကြား အနွေးဓာတ်အလို့ငှာ ယှက်သွားထားသည့် လက်အစုံကို အသာဆန့်ထုတ်၍ နှံဘေးနားက မျက်မှန်ကို တပ်လိုက်သည်။ဝေလီဝေလင်း အချိန်မို့ထင် ရွာထိပ်မီးကင်းတဲလေး၏ တံစက်မြိတ်မှ နှင်းရည်တို့ တဖောက်ဖောက် ကျနေသည်မှာ စည်းချက်ညီညီ။ နွေဦးနံနက်ခင်းတွင် ကိုရင်အောင်ဆိုး တယောက် အဝေးမှ ပြန့်လွင့်လာသော ကြီးဒေါ်အေး အိမ်မှ ကြေးစည်သံသဲ့သဲ့ကို ခေတ္တမျှ အာရုံစိုက်လိုက်ရင်း ပါးစပ်မှလဲ ခပ်ဖွဖွ သာဓု၂ကြိမ်ခန့် လိုက်ခေါ်မိသည်။ လေနုအေးနှင့်အတူ ထင်းမီးခိုးနံ့သင်းသင်းကို ရှူရှိုက်လိုက်ရင်း ဒါဆို ရွာလည်နား သူကြီးအိမ်တောင်ဘက်က အမေပု၏ မုန့်ပျားသလက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ပီဖြစ်ကြောင်း အတပ်သိလိုက်ပေသည်။ ကိုအောင်ဆိုးတယောက် ခပ်သွက်သွက်ထရင်း မီးညှောင့်ရိုးဘက် လည်နေသော ခါးပုံစကို ရှေ့သို့ဆွဲယူ လုံချည်ကို ထိုင်လျှက်ပြန်ဝတ်ပီးနောက် မီးကင်တဲလေး၏ ထုတ်တန်းနှင့် ခေါင်းမတိုက်မိစေရန် သတိကြီးစွာထားက မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ ရောင်နီစနှင့်အတူ နေခြည်က၀င့်စွာ ထိုးနေပီမို့ အရင်လို မီးကင်းအောက်ဆင်း တိုင်ဘေးနားကပ်ကာ တညတာဖြည့်သွင်းထားသော သေရည်ထူထူတို့ကို ပြန်လည်စွန့်ထုတ်ခြင်းအမှုအတွက် လူသူလေးပါး မြင်သာသည်မို့ နှုတ်ခမ်းတချက်မဲ့ကာ ခေတ္တမျှအောင့်အီးရင်း အိမ်သို့ အသွက်လှမ်းလာမိတော့သည်။
အား …. အင့်… ကျွတ်စ်..စ်
မျက်လုံးတွေ အရင်မဖွင့်နိူင်သေးခင် ဦးခေါင်းထဲ တဒိတ်ဒိတ် ထိုးနေမှုကြောင့် ဘကြီးမိုက်တယောက် အတော်နှင့် ခေါင်းမထူနိူင်။ ကပ်ခြောက်နေသော ခံတွင်းကို လျှာဖြင့်သပ်ရင်း တလက်စတည်း ” ဟေ့ လူလေး ဖိုးတိုက် အဘကိုရေတခွက်ပေးစမ်းကွာ …. နွားတွေရော လှန်ပီးပလားကွ နေမထိုးခင် ပဲခင်းဘက်သွားရအုံးမယ်”။တဲကြမ်းပြင် သိမ့်ခနဲအကျ ရေစက်များသီးနေသော ကြေးဖလားတလုံးနှင့်အတူ မြင်လိုက်ရတာက တူမတော် မိအုပ် စူပုံ့ပုံ့ဗိုက်ကလေးအား လက်တဘက်ဖြင့် အသာထောက်ရင်း”ကိုရင်တိုက်တော့ နွားတွေလှန်လက်စနဲ့ တခါတည်း ပဲခင်းဘက်ဆင်းသွားပီ။ ဒီမှာ အဘစားဖို့ ထမင်းနဲ့ပဲလေးပြုတ်ထားတယ် အာရုခံ လည်းလောင်းပီးသွားပီ အဘအေးအေး စားပီးမှ လယ်ထဲဆင်းတော့လေ”။ဘကြီးမိုက် တယောက်ရေတဖလားကို တကြိုက်ကြိုက်သောက်ရင်း တူမတော်ကို အသာခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ခုတလော ကိုအောင်ပု အရက်တွေ ဘာဖြစ်နေတယ်မသိ သောက်တော့လဲ တရှိန်ထိုးမူး မနက်ခင်းကျပြန်တော့ အနည်ပြန်လို့ တလူးလူးခံစားရသည်။ အရင်လိုမဟုတ် အတန်ငယ်ထူးနေပီမို့ သတင်းလေးဘာလေးထောက် စနည်းနာမှ ဖြစ်တော့မည်။ တောက်စ် … ကိုယ့်မလဲ ဒီအရည်နဲ့ မကင်းနိူင်တော့ ခံပေဦးတော့ဘဲလေ…..။
“အမေပု ကျုပ်ကို မုန့်နှစ်ချပ်လောက် ပိုက်ဆံတော့ မပါဘူး နေ့လည်မှ ရေးထမ်းပေးမယ်” ….။ ဒါက ရွာ့အော်ကြောလန် ငရဲအသံ။ ဒင်းက မိဘမဲ့တကောင်ကြွက် ရွာမှာလူဆိုးစာရင်းတော့ မ၀င်ပေမဲ့ တရွာလုံးက မျက်ကွယ်ပြုထားရသူ စနေနေတက်ရေတက်မှာ မွေးပေမဲ့ ဘာနက္ခတ်မိသွားသည်မသိ နည်းနည်းမပြည့်ဘဲ ချောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသူ။ မနက်မိုးလင်းလို့ ကိုယ်တော်တွေ အာရုံလောင်းပီးရင် ဈေးဦးပေါက် မပေါက် သူကတော့ ရောက်လာတတ်မြဲ။ တခါတလေလဲ ရွာ့အရှေ့ဘက် မိနိူတို့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ဘက် ခြေဦးလှည့်နေရင်တော့ သူရောက်မလာတတ်ပေ။ များသောအားဖြင့်တော့ သူ့စံနန်း မီးကင်းနဲ့ အနီးဆုံးက အမေပုဆိုင်မို့ အမြဲတစေတော့ ရောက်လာတတ်သည်။ အမေပုက သားထောက်သမီးခံမရှိ ရှိတဲ့လယ်လေး သီးစားချရင်း ကုသိုလ်လဲရ ၀မ်းလဲဝ အလုပ်အကိုင်လေးရှိတော့ ကျန်းမာရေးမခိုက်ရအောင် ဒီဆိုင်လေး လင်းအားကြီးဖွင့် နေ့လည်မတော့ ဥပုဉ်စောင့် တရားစာဖတ်ရင်း ရိုးရိုးအေးအေးနေသူ။ ငယ်ငယ်ကတော့ အတော် ဆတ်ဆတ်ထိမခံပေမဲ့ အသက်အရွယ်တွေ ရလာတော့ ဒါတွေကို တရားနဲ့ ဖြေဖျောက်ကာနေသူ “ဟဲ့ .. ငရဲ မင်းခုတလောမယ် မီးကင်းမှာလဲမကပ် ညဥ့်ဘက်ဘယ် သဝေထိုးနေတာတုန်း။ သူကြီးမင်းသိလို့ ဘုံပျောက်နေဦးမယ်” ပြောသာပြောရတာ ခုတလောမယ် ရွာထဲလှုပ်စစနဲ့ ညဆိုမီးကင်းဘက်မှာ လူတပုံ ကာလသားကြီးတွေရော အငယ်တွေပါ အုတ်အုတ်ရုတ်ရုတ်နဲ့မို့ ဒီကလေး နေစရာရှိမယ်မထင်။
ရှေ့ကပူနွေးနွေး မုန့်ပျားသလက်ကို ဆတ်ခနဲတချက်ဖဲ့ရင်း လေပြင်းတချက်မှုတ်ကာ ပါးစပ်ထဲသွပ်လိုက်သည်။ ခုတလော ငရဲစိတ်တွေ ထွေနေသည်။ ဒီကြားထဲ ရွာထဲမှာကိုယ်နားမလည်တာတွေဘဲ ကြားနေရလို့ နားအေးပါးအေး ချောင်းရိုးနံဘေးက ဘကြီးချော စဉ့်အိုးလုပ်တဲ့တဲမှာ လုပ်ကူရင်း ဒီဘက်ပြန်မရောက်တော့။ ရွာကာလသားတွေလဲ ဘာအကြောင်းရယ်မသိ ညနေမှောင်ရီပျိုးတာနဲ့ ငရဲရဲ့စံနန်း မီးကင်းမှာ စုကြပီး ၀ိုင်းဖွဲ့နေလိုက်ကြတာ တချို့လည်း ညဥ့်နက်မှပြန် တချို့လူလွတ်တွေလဲ အဲ့မှာဘဲသောက်စားပီး မိုးလင်းမှ ထပြန်ကြသဖြင့် ငရဲအတွက်နေစရာမရှိ။ ခုတလော ဘကြီးချောလဲ အလုပ်တအားကြရဲ့ထင် ရွာထဲပင် မ၀င်အား ချောင်းရိုးမှာဘဲ တနေကုန် သူ့ကျောပြောင်ပြောင်ကြီးကို နေပူလှန်းရင်း စဥ့်အိုးတွေကြား ဗျာများနေသည်။ ဒီရွာတကြောမှာတော့ ဘကြီးချောရဲ့စဥ့်အိုးတွေ နာမည်ကြီးသလို သူ့တူမတွေ အကြောင်းက မပြောမပြီး နာမည်ကြီးကြသည်။ မြို့ကျောင်းတက်နေသော မောင်ဂီတယောက် ရွာပြန်လာရင်ဖြင့် အမြဲဆိုသလို ဘကြီးချောတဲဘက်လာတတ်ပီး ” အဘချော စဥ့်အိုးတွေ ကောင်းချက်ကတော့ဗျာ ကျုပ်တို့မြို့မှာ ပြောတဲ့စကားအတိုင်း ပြန်ပြောရရင် ကိုးလောက်ရှိသဗျတဲ့ ဒီကောင်က ဒီစကားပြောတိုင်း ဘကြီးချော တူမ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ တုံကြီးနဲ့ အုံကြီးကို စိုက်စိုက်ကြည့်တတ်သည်။ ငရဲကတော့ သိပ်နားမလည် ဘကြီးချော ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အဟေး…အဟေးနဲ့ ရယ်မောရင်း သူ့စဥ့်အိုးကြီးတွေကို ပွတ်ကာ ကျေနပ်နှစ်သက်နေတတ်သည်။အကြီးမ အုံကြီးကတော့ ဘာမျှမပြော အငယ်မတုံကြီးကတော့ နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ကာ မောင်ဂီကို မျက်စောင်းထိုးကြည့်တတ်တာ ငရဲသတိထားမိသည်။
ခုတလော ရွာထဲတွင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေသည်။ မီးကင်းမတော့ အဆိုးဆုံးက ရွာ့ကာလသား ကိုရင်ဦးကျောက်၊ ကိုရင်အောင်ဆိုးနဲ့ ငရဲနဲ့အလွန်ခင်သော သန်းညီခေါ် ညှက်စိတို့ အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အရင်ဆို သူတို့က ရွာ့အနောက်ထိပ် ဦးအောင်ပု အရက်ဆိုင်မှာ စုဝေးပီး ငရဲတို့လိုက်မမှီသော စကားတွေ စုဖွဲ့ပြောနေတတ်ကြသည်။ အဲ့ထဲကိုရင်ကျောက်က အဆိုးဆုံး သူ့ကိုလေးဆယ်ကျော် ငါးဆယ်နားကပ်နေသမို့ ဦးတပ်ခေါ်က လွှတ်စိတ်ဆိုးတတ်ပီး စိတ်အခန့်မသင့်ရင် ဆဲပါလွှတ်တတ်သည်။ နဂိုသဘောမနောကောင်းပေမဲ့ အဲ့ကိစ္စတော့ သူခွင့်မလွှတ်တတ်ပေ။ ကိုရင်အောင်ဆိုးကတော့ ရွာကဗီဒီယိုရုံထောင်ထားသူ ကပေအပြောအရတော့ စနိုက်ပါအောင်ဆိုးလို့ ကွယ်ရာခေါ်တတ်ကြသည်။ငရဲသိသလောက်တော့ ဒီလူကလူအေး မထုံတတ်တေးမို့ ရွာ့ကာလသမီးတွေ သူ့ကိုသဘောလည်းကျ အားလည်းမရတတ်ပေ။ ညှက်စိကတော့ ကဗျာရူး၊စာရူး သူ့ကောင်မလေးကိုတောင် ပို့စ်မော်ဒန်နဲ့ နံရိုးဆိုလား အံသွားဆိုလား တင်စားပီး ကဗျာတွေ ဖွဲ့တတ်သည်။ သူ့ကောင်မလေး ချစ်စုမက လမ်းလျှောက်ရင် ဘောက်ဆတ်ဆတ်နဲ့မို့ ငရဲက ကွယ်ရာတွင် ညှက်ပိလို့ နာမည်ပေးထားသည်။ သူတို့၂ယောက် နေပူထဲလမ်းလျှောက်ရင် အရိပ်မထွက်ကြပေ။ ငရဲကတော့ သူတို့ပြောတဲ့ အချစ်ဆိုတာတွေ၊ အသည်းဆိုတာတွေကို ဘ၀င်မကျ အဲ့သာတွေ ထမင်းလုပ်စားလို့မှ မရတတ်တာ။ ငရဲကတော့ နေ့စဉ်ဝမ်းမီးငြိမ်းဖို့လိုသည်၊ ငရဲမှာ ပိုက်ဆံတော့မရှိ ဒါပေမဲ့ ရွာတရွာလုံး ငရဲရေပုံးနဲ့ မလွတ်တတ်ကြတော့ သူကြီးတောင် ငရဲကို ပြန်မပြောရပေ။ တခါသား ငရဲစိတ်ပေါက်ပီး သူကြီးအိမ်က ဆာဗာကို ရေနဲ့ပက်လိုက်တာ သူကြီး၃ရက်လောက် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားသေး။ဒါကိုဘဲ နတ်ကတော် ဖိုးထောင်က အောက်လမ်းနည်းနဲ့ လုပ်တာဆိုပီး သဂျီးကို ချွန်သေးတယ်။ တော်သေးသပေါ့ ရွာလည် ကုန်စုံဆိုင်က ဦးပါကြီးဝင်ကယ်လို့ ငရဲအထုပ်မပြင်ရတာ။
တောက်စ်…. ဒီလူကွာ မလုပ်သင့်တာကို” ဘကြီးမိုက် အတော်ဒေါသထွက်နေတယ်၊ ကိုရင်အောင်ပုတယောက် အရင်လို အရက်ကို မချက်တော့ဘဲ၊ မြို့ကကြီးဒေါ်ကြေးမုံ ရောင်းတဲ့ ရေဆူဆေးလုံးတွေနဲ့ အရက်ကို ရောင်းနေတယ်တဲ့။ သတင်းက သဲ့သဲ့ဆိုပေမဲ့ အတိအကျရယ်၊ မြို့ကိုကုန်တိုက်နေတဲ့ မော်တော်ဆလင် ဦးဖောက ဒီသတင်းကို အတိအကျပေးတာ၊ ဒီလူက နှံ့စပ်တယ် မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ မပြောလောက်ဘူးရယ်။ မနေ့ကတွေ့တော့ ကိုရင်မိုက် ကအောင်ပုတော့ မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ အဲ့ဆေးလုံးတွေက ရမ်ဆိုရမ်အရသာ၊ ချက်အရက်ဆို ချက်အရက်အရသာ အနံ့ရော အရောင်ရော ဘာမှခွဲမရဘူးတဲ့ ကြေးမုံဂျီးတူမက တရုတ်ပြည်ဘက်က သယ်လာတာ ဆေးတလုံးကို ရေ၁၀လုံးနဲ့ဖောက် ညသိပ်ထားရင် မနက်ကျ တန်းအရက်ဖြစ်တာတဲ့။ ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ ရွာ့အရက်သမားတွေ ရှေ့ရေးမလွယ်တော့ မြန်မြန်ကိစ္စချောနိူင်တာမို့ သဂျီးကိုတိုင်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားမိပြန်တော့ ဆရာတော်ပါသိသွားရင် ပိုဆိုးနိူင်မယ်။ ခဏလောက် မျက်မှောင်ကြုံပီး စဉ်းစားလိုက်မှ အဖြေတခုရတယ်၊ ဟုတ်ပီ ကြေးမုံဂျီး ငယ်ရည်းဇား ဘုရားဒကာ၊ ကျောင်းဒကာ၊ အိမ်သာဒကာ အကုန်ပါတဲ့ ကကြောင်ရှိမှန်း သွားသတိရတယ်၊ ဒီလူက သဂျီးကို ကလန်နိူင်တဲ့အပြင် ရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးဆိုတော့ ကြေးမုံဂျီးနဲ့ ကအောင်ပုကိစ္စ သူ့ကိုကြားက ၀င်ရှင်းခိုင်းမှရမယ် သိပ်နှေးလို့ မဖြစ်အခုဘဲ ကိုဖောကို ခေါ်သွားပီး သတင်းကို ပိုပိုလေးပြောခိုင်းမှ ဖြစ်မယ်။
ကော်ဖီချိန်မှာ အမေပု ရဲ့ မုန့်ပြားတစ်လက်နဲ့ လူအများနှင့် မဆိုင်သောလူ့（ပြောချင်တာက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တော့ ဆိုင်ပုံရတယ် ）:hee:
အမေပု ရဲ့ မုန့်ပြားတစ်လက်နဲ့
ဆိုတော့ အဒိတ်ပယ်တွေ လွဲကုန်ပါ့မယ် …… ဂျီးဒေါ်ညရယ်
:hee: မွှားးးးရို့အဲ ဟုတ်ပေါင် မမှားပါဝူးးး
မှန်ပါဒယ် နှစ်ခါ မန့်တော့ ၂၀ ပေါ့
ွေိခွိ အခုတစ်လော တယ်တတ်
ဒကာပေါင်းစုံ ဦးကြောင်နှင့် တရုတ်သဗုန် ကြေးမုံဂျီး ဒီည တွေ့မပေါ့
တာဝတိံသာကနေ နတ်မျက်စိ ပုလင်းကွဲနဲ့ ချောင်းကြည့်ဦးမှ
ကျုပ် ဗွီဒီယိုရုံမှာ ပြမယ့်
ဒီတစ်ခါ ဂဇက် ကွန်ဖရဲင့်စ်ကျရင် ကဆာမိနဲ့ နီပေပါကို ပြဇာတ်ကခိုင်းမယ်။
အရင်ရေးတဲ့ လက်ရာနဲ့ ပြောင်းသွားလို့ လူကိုတောင် မဖမ်းမိ မမှန်းမိတော့ဘူး။
နေရာတကာပါတဲ့ ကကြောင်ကြီး ရှိပေလို့သာပဲ။
ငါလည်းမနိုင်ဘူး ကရဲစည်ရေ… သူနဲ့ရဲဇားဖြစ်တုံးက ကော်ဖီထဲ စိတ်ကြွဆေးထည့်ပြီး ငါ့လပြိုဘဝ ဖျက်ဆီးခဲ့တာ ဒင်းပေါ့… ကြေးမုံဂျီး တရုတ်သဗုံ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဝါဒဖြန့်ချီရေးမှူး ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီ လုံခြုံရေးမှူး Huawei မိုဘိုင်းဖုံးစက်အစုတ် ကိုယ်စားလှယ်… နောက်ဘာရှိသေးလဲ…. မဟုတ်တရုတ် မှန်သမျှအကုန်…..
တဆက်ထဲ.. ရွာသူားများကို.. ဆွေးနွေးလိုပါတယ်.။
တချို့ “ခနဲ့စာ”.”.ပျော်ပျက်စာ”.. “သရော်စာ”တွေက.. ကိုယ်ကရေးရင်သာ..တော်တော်အားစိုက်ရတာ.. ။ ရေးပြီး ပါ့ဗလစ်(လူသူရှေ့) ချပြရင်.. ပါဝင်သူတွေရဲ့.. ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကျူးမိ..ကျော်မိသွားတတ်ပါတယ်..။
ကိုယ့်အသိ..မိတ်ဆွေတွေကို.. ကိုယ်က..ခင်မင်ရင်းနှီးစိတ်နဲ့ “ခနဲ့စာ..သရော်စာ.. ပျော်ပျက်စာ”ထဲထည့်ရေးရာမှာ.. ကိုယ်နှိုက်ကသူတပါးကိုယ်ရေးကိုယ်တာ.. အချက်အလက်တွေသိထားနေရင်.. .(ကိုယ်ကမရည်ရွယ်ပေမယ့်)..
လူသူရှေ့ချပြရတာမှာ.. ကာယကံရှင်ကို.. စော်ကားသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်..။
အသက်နဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ.. ဘယ်လိုရေးတာဟာ.. ဘယ်တာသွားတယ်.. သိတတ်.. သိနိုင်ပေမယ့်.. (သာမန်အားဖြင့်).. အခုလို.. “ခနဲ့စာ..သရော်စာ..ပျော်ပျက်စာ”ရေးတာမျိုးကို မကြိုက်သူတွေရှိပါတယ်..
နောင်ရွာသူားတွေ.. နစ်ခ်နိမ်းအမည်တိုက်ရိုက်..။ အချက်အလက်တိုက်ရိုက်သုံးပြီး.. ခနဲ့စာ..။ သရော်စာ..။ ပျော်ပျက်စာရေးတာတွေ. ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့.. ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြောင်း..
ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး. ရွာရဲ့ Congress မှာ.. ရွာလူကြီး..ရွာသူား..များနဲ့.. ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလိုပါကြောင်း..။
မှတ်ချက်။ ။ ကျုပ်ကိုတော့ ရေးချင်သလိုရေးနိုင်ပါကြောင်း. ရယ်.။ :harr:
တဆက်ထဲ.. ရွာသူားများကို.. ဆွေးနွေးလိုပါတယ်.။ …
သဂျီးရေ… နည်းနည်းမှားနေသလိုပဲနော်… ကိုရဲစည်နဲ့ ကိုရင်စည်သူက လူကော
ဘာကော ညာကော အ၀ှာကော တခြားစီပါနော်…။ သရော်စာဆိုတာ တော်တော် အန်ဒရယ်များတဲ့
အရေးအသားတွေမို့ ရှောင်ဘာဒယ်.. ဘဘသဂျီးရယ်..
သမီးလေးတွေ မျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့ လူဂျီးထင်ပြီး အထင်လွဲကုန်ရင် ကိုရင် ရင်ကျိုးရချည်ရဲ့..
သဂျီးက အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ ….
ဒီလို ခနဲ့စာ ၊.ပျော်ပျက်စာ၊သရော်စာ တွေထဲက တစ်ပုဒ် မှာ အရီး နာမည်သုံးထားတာကို အရီးက မကြိုက်လို့ ကန့်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
အဲဒီ စာကို ရေးသူ က ဘယ်လိုတာဝန်ယူ သင့်သလဲ ဆိုတာ တွေးမိလို့
မင်း ရဲ့ စာ ကလဲ ဒီလို မျိုးမို့
မင်းဆိုရင် ရော Post ပိုင်ရှင် အနေနဲ့ ဘယ်လို တာဝန်ယူ မယ် စိတ်ကူးထား လဲ ဆိုတာ သိချင်ပါရဲ့။
အတော်များများကတော့ နာမည်ကို သရော်စာထဲ ထည့်ရေးကျရင် မကြိုက်တတ်ကျဘူးရယ်။
ကျနော့် အမြင်တော့ … ကျနော်က ပို့စ်တင်ရေးတာ အပျော်သဘော သက်သက်မို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိခိုက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒ တစုံတရာမရှိပါ။
နာမည်ပါသူ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့ကို ထိန်းသိမ်းစည်းကြပ်ကျသော လူကြီးများပါ အပါ တရားဝင်ကန့်ကွက်လာ/လာပီဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော် နောက်မရေးတော့ပါဘူး ခင်ဗျ။ ခုရေးခဲ့တဲ့ စာမှာရော အရှေ့ကရေးခဲ့တာတွေမှာပါ နာမည်ပါခဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ စာရေးသူ ပို့စ်ပိုင်ရှင် တယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ယူပါတယ်။ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ တတ်နိူင်သလောက် အစွမ်းကုန် တာဝန်ယူပေးရမယ်ဆိုတာ သေချာရှင်းလင်းစွာ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
တခြားတင်ပြချင်တာ တခုကတော့ ကျွန်တော် မန်းလေးဂဇက် မန်ဘာတွေ နာမည်ကို ထည့်ရေးမိလို့ One for All စနစ်မျိုးနဲ့ စတိုင်းယားကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်နည်းမကျဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ တဦးတယောက်ထဲ အမြင်ပါ။ ကျွန်တော့ထက် သက်ကြီးဝါကြီး ပညာကြီးသူများ၏ ဆုံးမ သြ၀ါဒကို နာခံမည် ဖြစ်ပါကြောင်း…။
လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့စာကို မဖျက်ပါနဲ့ အုံးခင်ဗျ။ အများသဘောကို နာခံချင်လို့ပါ …။
မောင်ကျောက်ကတော့ “ရှော့” မရှိပါဘူး…
ချစ်လို့ ကြည်စယ်တယ်လို့ပဲ သဘောထားတာမို့…
နစ်နာစေလိုတဲ့ သဘောမရှိရင် ခွင့်ပြုထားစေချင်ပါတယ်…
အဲ… လွန်တာရှိရင်တော့ဝန္နာမိ တောင်းပန်ပြီး ပို့စ် ပြန်ဖျက်ပေါ့ဗျာ…
အဲ… မန့် မယ့်သူတွေကလည်း “စည်း”ကလေးတော့ “သိ”ကြပါလို့…
သဘောကျတယ်။ သဘောကျတယ်။ (ကို ရဲ စည် အရေးအသားကို)
အားမရဘူး။ အားမရဘူး။ (ပထမပိုင်း ပဲ ဖတ်ရတာကို)
(ကျနော် မန့်သူ စည်း ကျော်မိပလားဟင်င်င်)
ဟိတ်လူ ကိုရဲစီ ..
တွေ့လား သဘောကျတဲ့သူ ရှိနေဒယ်..
ဆက်ရေးပါ.. ကျုပ်နာမည်ကိုလိုရင် ယူသုံးချင်လည်း သုံးပါ..
ကျုပ်ကတော့ သူများတွေ ရွာ အကြောင်းရေးရင်
ကျုပ်နာမည်လေး ပါချင်သား ( သူတောင်စား၊ အရက်သမား၊ လူဆိုး ဘယ်ကပါရပါရ )
အာဏာရှင်အောက် ၁၀နှစ်လောက် မွန်းကျပ်ဖူးလို့ လစ်ဘရယ်ဘက် ပြောင်းလာပါတယ်
နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေက ကတ်တဂိုရီ လာခွဲနေသေး …………………..။
ခင်ညားကြီးကလည်း ကျုပ်က ရွဲ့ပြောတာပါဗျ..
တကယ်ရေးလည်း ခံနေရတာပဲကို ..
ချောက်လည်းမတွန်းမှန်း သိပါတယ်. နဲနဲတိမ်သေးရင်ပေါ့..
ဒါနဲ့ ကျုပ်က ကွန်ပျော့လစ်ဘရယ်ယောင် ပါဗျာ..
ကြည့်နေလို့ အကောင်းမမှတ်နဲ့ ။
ကျုပ် အလုံးတွေ ယူသုံးတာ များနေပြီနော်။
အဲ။ ချဉ်ဖတ် အလုံးတွေ သုံးတာ များသွားပြီ။ ခဲမိုးမရွာခင်လစ်မှရယ်။
လူချစ်လူခင်များသွားအောင် ဇာတ်နာနာလေးရေးပေးလိုက်ပါ ဗျာ ..
အဲ့ဒါမှ တရွာလုံးကသနားပီးချစ်သွားကြမှာ.. ဟိဟိ
ကျနော့်နာမည်ယူသုံးပါ နိုးပလော်ပလန်ဘာ ဘတ်၊ သို့သော်..၊ ဒါပေမယ့်
စုတ်တီးစုတ်ပဲ့နေရာမှာ မသုံးဘာနဲ့ နေတက်ရေတက်မှာ ကိုးန၀င်းနဲ့အကိုက်အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ရာဇ၀င်ကောင်းတွေနဲ့ နာမည်မို့လို့ နေရာရွေးပေးပါ… မဟုတ်လို့ကတော့ တာဝံယူဖို့စင်းဇားထားဘာ… ဒါဗျဲ
အော်… လျော်ကျေးဒွေဘာဒွေတောင်းလို့ရရင်ကောင်းမယ်နော် ဒေါ်လာသန်းဘလောက်ဆိုပီးတော့လေ… စယ်လီဗျစ်တီတွေလိုလေ ဟီးဟီးး
ဒီလို ခနဲ့စာ ၊.ပျော်ပျက်စာ၊သရော်စာ တွေ
ကျနော့်အထင် ရိုးသားစွာပြောပြရင် ….
သာမာန် ဟာသ(ဟာသတောင် ရိုးရိုးလေး ဒရမ်မာဘက် ပိုသေးတယ်) စာလေးလို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မှတ်သလောက်၊ ဖတ်ဖူးသလောက်ကို ပြန်ရေးကြည့်မိတာပါ။ ကျွန်တော်စာတပုဒ်ရေးဖြစ်ရင် သူများကို ပြောရပီးရော လက်လွတ်စပယ် မရေးခဲ့ဖူးပါဘူး publish မလုပ်ခင် စဉ်းစားပါသေးတယ်။ အခုလဲ စာတပုဒ်လုံးမှာ ထောက်စရာ ၂ခုလောက်တွေ့လို့ အပြီးထိမတင်ဘဲ ရပ်ထားတာပါ၊ ထင်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်လာပီ ဆိုတော့ ဂဇက်အောက်မှာနေရင် ဂဇက်ရဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာပါ့မယ်။
တာဝန်ယူတဲ့ အပိုင်းကတော့ ရေးပီးတောင်းပန်လိုက်ယုံ ၊ စာတွေဖျက်လိုက်ယုံနဲ့ မပီးတာမို့ ဘယ်အတိုင်းတာထိ ဆိုတာမျိုး သတ်မှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒီမနက် အိပ်ရာထကတည်းက ခေါင်းတွေ တစစ်စစ်နဲ့ကိုက်နေတာ…
အနော်ကတော့ ဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်… ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဆက်ရေးပါ ကရဲစည်…
ခေးကို တော့ မထိနဲ့ဂျာ
အန် .. ဒါဆို ..
ခညား ခေးက မီးခြစ်လားဟင်င်င် ..
မတိရို့ မေးကျိဒါနော် .. ဟီးဟီး …
ဟက်လူ .. ငရဲ …
ခညား ကျုပ်ဆီက သောက်သွားတဲ့
ဘီအီး နှစ်လုံးဖိုးအတွက် ရေထမ်းပေးဖို့ မမေ့နဲ့အုံး …
ကျန်ဒါဒေါ့ သိဘူး …
ဒါဘာဗျဲ … ဟဲဟဲ …
၁- အပေါ်က သူကြီးရဲ့ကွန်မင့်မှာ ကိုရင်စည်သူ ဆိုပြီး မှားပြောထားတာ တွေ့မိပါကြောင်း..။
၂-(((-နောင်ရွာသူားတွေ.. နစ်ခ်နိမ်းအမည်တိုက်ရိုက်..။ အချက်အလက်တိုက်ရိုက်သုံးပြီး.. ခနဲ့စာ..။ သရော်စာ..။ ပျော်ပျက်စာရေးတာတွေ. ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့.. ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြောင်း..))) ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ
ခွင့်မပြုတော့ဘူး ဆိုတာကတော့ နဲနဲ ပြင်းတယ် ထင်ပါကြောင်း..။
ကိုယ်ပိုင်မှ ရေးပြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူရမည် ဆိုလျှင် သင့်ပါကြောင်း။
၃-အဲဒါ အများအတွက်ပြောတာသာဖြစ်ပြီး ကျုပ်ကိုတော့ မည်သူမဆို ကြိုက်သလို ရေးနိုင်ပါကြောင်း။
ကျုပ်ကလဲ ရွာထဲမှာ ကိုယ့်ကိုနစ်နာစေလိုသူ တစ်ယောက်မှမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါကြောင်း။
အဲ့ဒါကြောင့်လဲ . . . . ဦးပါ . . ဦးပါ နဲ့ နံမည်ကြီးတော့တာကိုး လို့ . . . . အဲ့ဒါ ကော်ဖီ တိုက် . .
၁- အပေါ်က သူကြီးရဲ့ကွန်မင့်မှာ ကိုရင်စည်သူ ဆိုပြီး မှားပြောထားတာ တွေ့မိပါကြောင်း..။
မှားရေးတာတော့ မဟုတ်တန်ရာဘူး … ရွာထဲမှာ ကျနော့် နာမည် အရင်းသိတဲ့ သူတွေ အများကြီး ..။
မင်းပြဇာတ်ကြီးမှာ ငါက ဘယ်အပိုင်းရောက်မှ ပါရမှာလဲဟ။
မပါတော့ဘူး ဦပေါက် ..
ဆက်လဲ မတင်တော့ဘူး ….
မှတ်သွားပါဘီ ….. နောင်ဆို ခင်မိရင်တောင်
မေတ္တာပို့ထဲ ထည့်မရွတ်တော့ဘူး … မတော်ကြားသွားမှဖြင့်
ကရဲစည် က tempo မြင့်သကိုး
ကျမလည်း တချိန်လုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ
စိတ်မြန်တဲ့သူဆိုတော့ မကျေနပ်ဖူး အစာမကြေဖူးဆိုရင်
ပြောကို ပြောလိုက်ရမှ နေရထိုင်ရ သက်သာတာမို့
ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်တဲ့ သူဆိုပြီး ရှင်ပဲပြောထားပြီး နားလည်ပေးမယ် မလား
ရှင်စိတ်မကောင်းတာ မြင်တော့ကျမလည်း ၀မ်းနည်းတယ်
ပိုစ့်ဖတ်ပြီး ညက တခွီးခွီး ရီနေတာ အောက်က ကွန်းမန့်တွေ့တော့ မှ စိတ်ထဲ တင်းသွားတာ
ဘာပြောတာလဲပေါ့ အဲ့ဒီမှာ စိတ်ဖောက်သွားတာ
ခုလို ပြောပြရှင်းပြတော့ ကျမလည်း စိတ်ပြေသွားပြီ ။
ခင်လို့ ထည့်တာမို့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း clean ဖြစ်တာမို့ ခွင့်လွှတ်တယ် ခွင့်ပြုတယ်
ဒါကြောင့်မို့ ကျမနာမည်ဆက်သုံးပါ ဒီပိုစ့်ကို အဆုံးသတ်ပေးပါ ဆက်စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်
ရှင် ဆက်မရေးရင် ကျမအပြစ်လည်း ကြီးတာမို့ ရွာက ထွက်မယ် ဒါဗျဲ
(နောက်တာမဟုတ် အတည် )
ရွာမှာ စတိုင်းယားသာ မရှိရင် ရွာကြီးခြောက်သွေ့သွားမှာပေါ့ သမိုင်းတရားခံတော့ ကျမလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး
သူကြီးနဲ့ ရွာလူကြီးများ အာရုံနောက်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ သူကြီးပျင်းနေမှာစိုးလို့ အလုပ်ပေးတာပါ တကယ်က
ကိုယ်က ဒုံးကလည်း ခပ်ဝေးဝေးမို့ ကမ္ဘာကြီး ဘာဖြစ်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူး။
အခုတော့ လောကနတ် စည်းဝါးကိုင်ပြီးဝင်လာပြီထင်ပါတယ်။
ရန်ဖြစ်လိုက်ပြီးရင် ရှေးကထက် ပိုချစ်ကြပါကုန်လော့။
သမိုင်းတရားခံတော့ အစ်မမဖြစ်ပါဘူးဗျာ … ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တာရှိရင်လဲ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆက်ရေးလို့ မရတော့တဲ့ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
အဲ့နေ့က အလုပ်အတွက် စာရိုက်တာ ခဏနားပီး ဆရာမင်းလူရဲ့ အများနဲ့မသက်ဆိုင်သောသူ ဆိုတာလေး PDF နဲ့ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်ပီးပီးခြင်း ခဏနားပီး စိတ်ထဲပေါ်လာတာမို့ ရေးဖြစ်တာ။ ရေးနေရင်း ပထမတော့ ဇာတ်ကောင်တွေက အခြား နာမည်တွေဗျ။ ဒါပေမဲ့ ရွာထဲ စာဖတ်နာသူတွေများတော့ ပီးရင် ဒါကလဲ ရွာပို့စ်ဖြစ်တော့ ရွာထဲက လိုက်ဖက်မဲ့ ကာရိုက်တာတွေ ပြောင်းရေးမိပါရဲ့။
ရွာထဲတင်တာမို့ အချင်းချင်း ဖတ်မိရင် ပိုရင်းနှီးမလားလို့ တွေးမိတာ။ ကတ်တဂိုရီနဲ့ တဂ်ျမှာတောင် ခရီရေးတစ်ရိုက်တင်းနဲ့ ဆရာမင်းလူကို ရီနောင့်ဇ် ပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်တချက် တွေးတာက ရဲစည်ဆို ပေါက်ကရရေးနေကျမို့ နောက်တယ် ထင်မှာစိုးလို့ အဲ့လို ရေးဖြစ်တာ။ မူရင်းစာရေးသူရဲ့ ဟန်နဲ့ကွဲအောင် နည်းနည်းတော့ ပြောင်းရတာပေါ့။
မနက်က မနက် ၉နာရီလောက်မှာ ရင်ဝကို ဆောင့်ကန်ခံရတဲ့ ကွန်းမင့် ၂ခုကြောင့် နင့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ သေချာစိစစ်ပီး ရေးထားတာကိုမှ တန်ဖိုးအဖြတ်ခံရတာ၊ ကျနော့်ကို ဆူရင် ငေါက်ရင်တောင် လက်ခံနိူင်သေးတယ်။ ပြန်ဖွင့်လိုက် ပြန်ဖတ်လိုက်
ငါဘာမှားလဲ ပြန်တွေးလိုက် တော်တော်ကို ခေါင်းရှုပ်လိုက်နဲ့ ပြန်လှန်ကြည့်မိတယ်။ အဖြေကလဲ မထွက်ဘူး။ နောက်ပီး ကိုယ်ကလဲ လက်လွတ်စပယ် လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ တော်တော် တွေးရခက်တယ်။
ထားပါဗျာ …. ပြီးတာပြီးသွားပီဘဲ
ရင်ထဲတော့ ကျန်ခဲ့တာ ဟာတာတာကြီး
ဆက်တော့ ရေးလို့ မရဘူးဗျို့ မုဒ်ဘယ်လိုမှ သွင်းလို့မရတော့ဘူး။ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ
အမယ်။ ဒီလို ပြေးလို့ ရရိုးလား။
တရားဝင်ကျေအေးပေးပြီးနောက်မှာ အမည်ပါဖို့ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ပိတ်သတ်ကြီး စိတ်ထိခိုက်သွားအောင် မလုပ်ရဘူးဟဲ့။
ဒါထက် မင်းဇာတ်လမ်းထဲ မှာ အရီး ကိုလဲ (မင်းလူ ဇာတ်ကောင်) အတင်းတုတ်တတ်တဲ့ ပဲပြုတ်သည်နေရာလိုမျိုးမှာ ထားလဲ ရပါတယ် လို့။
ဒီမနက် ဒီ ကော်မန့် ဖတ်မိပြီး အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။
ရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင် မပြောနဲ့ ကျနော် မနေ့က တစ်နေ့လုံး ဖတ်လိုက် စဉ်းစားလိုက်လုပ်နေမိတာ။
ပျက်စီးသွားတဲ့ မုဒ် ကို ကိုယ်ချင်းစာပါ၏။
ဒါပေမဲ့ ရေးပြီးသားဆိုရင်တော့ တင်လိုက်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ် စ မိပြီဆိုတော့ အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါဗျာ။
ဟိုဘက် ပို့(စ) က ကိစ္စလည်း ကျနော်နောက်တာပါ။
မနေ့က ကိုရဲစည်က ပြောခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့
ကျနော် ကိုရဲစည်ကို အားနာနေမိလို့ရော လာပြောတာပါ။
ကျုပ်က စတိုင်းယားရေးတဲ့ ဒီဆြာကိုမှ စတိုင်းယားတပုဒ်ထဲမှာ နာမည်သုံးပြီး.
ဗီလိန် (ဗန့်) ခေါ်မလားဘဲ နေရာထားပြီး တစ်ပုဒ် ရေးဖူးသဗျ
ဟာသ သက်သက် ကလူကြည်ဆယ်မှုသက်သက် မို့
သူတကယ်မဟုတ်မှန်း ပိတ်သတ်ကြီးလည်း သိသလို.
နောက်နေမှန်းလည်း အားလုံး လက်ခံထားတဲ့အနေအထားပါဗျာ. အဲ့သည့်ဇာတ်မှာ
ဇွတ်လိုက်ကတော့ ဟို လောကဓာတ်ဆြာကြီးပေါ့နော့.ပြောချင်တာ က
ဒီစာရော ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့စာရော ဟာသ သက်သက် စတိုင်းယားသက်သက်
ဖြစ်တာကြောင့်မို့ သိက္ခာချတာ ပုတ်ခတ်တာ ထင်ယောင်လေမှားရေးတာ
ဒေါသဂိုဏ်းသင့်စေတာ. တွေ မပါမှန်း ခံစားနားလည်ကြမယ် ယူဆပါတယ်ဗျာ.
Take it easy … ပါ လူကြီးလူငယ်အပေါင်းတို့.
စိတ်ကူးယဉ် ကို စိတ်ကူးယဉ် လို့ သဘောထားပြီး ဖတ်ကြရေးကြပါစို့ရဲ့
စလိုက်ထိုးတာ ခြေခုတ်တာ အောက်လမ်းနည်းသုံးတာ တွေ ကတော့ သီးခြားရပ်တည်မှုအနေနဲ့
ရှိကောင်း ရှိမှာဖြစ်ပမယ့် ခေတ်ကို သရော်သော စနစ်ကို သရော်သော စတိုင်းယား သက်သက်နဲ့
တန်ဖိုး အရသာ နဲ့ ရိုသားမှုဂုဏ် ကွာတယ်ဆိုတာကို
ဂဇက်ရွာ စာပေအဆင့်အတန်းနဲ့ စောကျောမိရင် သိမယ် မြင်မယ် နားလည်မယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ပါကြောင်း
စကားစပ်လို့ တခုပြောပြမယ် EA Sports ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ နံပါတ်-၁ game ထုတ်လုပ်သူရှိသဗျ
လိူကြိုက်များဆုံး ဂိမ်းကတော့. သူတို့ နှစ်စဉ်ထုတ်တဲ့ FiFA soccer series ပါပဲ
FIFA ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နာမည် တပ်ထားလို့ မအံ့သြကြပါနဲ့ သူက
Globally official partner ဖြစ်ပါသတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဘောလုံးအသင်းတွေ ဘောလုံးသမားနာမည်တွေ သုံးထားဖြည့်စည်းထားပြီး
နှစ်တိုင်း game တွေ ထုတ်ပါသတဲ့.
သူတို့ ကြော်ငြာရဲ့ နေရာတခုမှာ ရေးလေ့ရှိတာ တခုရှိတယ်. အဲ့ဒါကတော့.
If there’s something in the game, it’s only in the game ပါတဲ့.ပြောချင်တာ ဂိမ်းထဲမှာ.
အပြင်မှာ တင် ပြသနာတက်နေတဲ့ ကစားသမား ၂ယောက် ပြသနာတက်နယ် တယောက်ထုတ်ခံရတယ်
ဂိမ်မာ က တိုက်ဆိုင်လှသကွာဆိုပြီး အနှီမှတ်တမ်းကို ဗီဒယို ကော်ပီ လုပ်ပီး ယူတု တင်တယ်
(တချို့လည်း နာမည်ကြီးချင်လို့ အပြင် ဖြစ်ရပ်အတိုင်းရလာဘ်ထွက်အောင် ဂိမ်းထဲလိုက်လုပ်တယ်)
အထက်က စာသားက ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိူ အကာကွယ်ပေးတဲ့ စာသားပါပဲ
ဂိမ်းဟာ ဂိမ်းပေါ့. ပိုစ့်ဟာပိုစ့်ပေါ့.
မခံစားနိုင်ရင် ရီပိုတ့် လုပ်ပေါ့.
စတိုင်းယား ကတ်တီဂိုရီ ကတော့ အရှိသင့်ဆုံးထဲမှာ ပါတယ်လို့မြင်မိရဲ့.
ရေးစရာရှိရေးပေါ့ဗျာ ကန့်ကွက်တဲ့အခါ ဖျက်စရာရှိ ဖျက်မယ်
စတိုင်းယားအရေခြုံပြီး တိုက်ခိုက်မှုရေးတာ နဲ့ စတိုင်းယားအစစ်နဲ့
ကွာအောင်ကြည့်ဖို့ကတော့. မျက်စိကောင်းရင် မြင်ပါတယ်ဗျာ. လို့သာ.
အော် ဖတ်မလို့ရှိသေးတယ် မရေးတော့ဘူးတဲ့
ရက်စက်ပါပေ့ ကယဲစီ ရယ်
ကျုပ်က.. အလကာနေရင်ထိုင်ရင်း.. ရွာဆူ..သူကြီးဖင်..အဲ..ခေါင်းကျိန်းတယ်..
အော်ကရဲစည်ရေ… အမှုကြီးပါ့အေ ညည်းမလဲ…
သူကြီးဆိုတော့လဲ သူက သူထုတ်တဲ့အမိန်.အတည်ပေါ့အေ…. လိုက်နာလိုက် လိုက်နာလိုက်..
ဒီဆိုဒ်ထဲ လစ်ဗရယ်လစ်ဗရယ် အော်အော်နေသူများ.. ဒါမျိုးကျတော့ လာမအော်ကြပြန်ဘူး…
ကျုပ်ကတော့ ရွှေတိုက်စိုး မင်းဟာ သောက်သုံးမကျဘူး.. သူတောင်းစား.. ဆန်ကုန်မြေလေး.. ဖွတ်ကြား..လို. မဆဲမခြင်း ရဒယ် ရေးသာရေး………
အော် ကျုပ်တောင် ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓာတ် ရှိနေပါလား………. ဟေးဟေးဟေး……
ဦးလေးက တိုင်ကွယ်နေလို့ မကြားတာနေမှာပါ…
ဗိုက်တွယ်နေဒါ နေမှာ …
ဟက်လား မိတိုက် …
ဘာတွေ ဖြစ်နေတာယဲတော့ တိဝူး … လှုပ်ကျိ လှုပ်ကျိနဲ့ … အဆက်စပ်လည်း ချိဝူး … ညက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ လိုက်ကျိတော့လည်း …. မတိဝူးးးးး ။
ညတုန်းက လာ စာထဲ ထည့်ရေးတဲ့ အကြောင်းလာပြောသွားတာ ဒီပို့စ်လား … အဟိ … အဲ့ကတည်းက ပြောလိုက်ပါတယ် နဲဗားမိုင်းဘာရို့ ။
တခြား လူတွေတော့ သိဝူး ကယွဲစည် ၊ အနော့်ကို ကြိုက်သလို ရေးနိုင်ပါအိ …..
လေထိုးလေရော် ….. ဒါဗြဲ :harr:
ဖတ်ပြီး ရယ်နေရတာတော့ တခွီးခွီးပဲ …… ဒွတ်တယပိုင်းစောင့်နေပါအိ …. ။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် နံမယ်ထည့်ရေးတာ မကြိုက်နိုင်လောက်တဲ့လူကိုတော့ စဉ်းစားပြီး ကြိုဖယ်ထားလိုက်ပေါ့ကွာ။
အခုရေးပြီးသားထဲမှာ ပါတယ်ဆိုရင်လဲ အဲဒီနာမယ် ဖြုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ကွာ။
ကိုယ့်နာမယ်ပါလို့ မကြိုက်သူကလဲ ပြန်ရေးပြီး စလိုက်ပေါ့။
အဲလိုရေးရင် ငါနဲ့ေ၇ွှဘိုသား သားအဖတောင်တော်သွားသေးသမောင်။
ကိုရင် ရဲစည် အနေနဲ့ 
ကျုပ်နာမည် မောင်ပေ ဆိုတာကို ဘယ်လိုသုံးရေးရေး
မည်သို့ မှ စိတ်ရှိမည် မဟုတ်ပါကြောင်း ၊ စာလို ပြောရရင်တော့ ခွင့်ပြုပါသည် ပေါ့ဗျာ
ခင်ဗျား ပို့ စ်က ဘာမှလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ ကို ဝင်ဖြဲနေကြတာ မြင်တော့
ဟိုတစ်လောက သီချင်း ခိုးပါတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာတုန်းကကြ ၊ အခု ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ တွေ ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်လို့ 
သီချင်းခိုးတာက ရွာအရေး နဲ့ ဘာများတိုက်ရိုက် ပါတ်သက်လို့ လဲ မောင်ပေရယ်။
မင်းလူရဲ့အများနှင့်မသက်ဆိုင်သော..လူကိုလည်း.
ဟဲ့ကရဲစည် နင်ကအလုပ်မလုပ်ခင် အဖေကြီးတို့ကိုမေ့နေတာကိုးဟဲ့ နင်အောင်မြင်ချင်ရင် green label ဆက်သဟဲ့ မဲမဲ ဝဝ ရုပ်ဆိုးဆိုးရွာထဲကအပြီးထွက်သွားရင် နင်ကံကောင်းပြီမှတ် ……………..